Waxgarad, Qurbojoog iyo Masuuliyiin u Dhashay Gabalka Jarar oo Balan ku Qaaday ka Qayb Galka Horumarinta Gabalka iyo la Dagaalanka Nabad Diidka. – Rasaasa News
Jul 9, 2011 Qurbojoog iyo Masuuliyiin u Dhashay Gabalka Jarar oo Balan ku Qaaday ka Qayb Galka Horumarinta Gabalka iyo la Dagaalanka Nabad Diidka., Waxgarad
Dhagaxbuur, July 9, 2011 [ras] – Waxgaradka u dhashay gabalka Jarar oo isugu jira maamulaka gabalka, Qurbo joog iyo masuuliyiinta gabalka ugu jira dawlada degaanka Somalida Ethiopia oo shir weyn oo wada tashi ah ku qabtay magaalada Dhagaxbuur.
Dadweynaha u dhashay gabalka dhagaxbuur oo siin jiray taageerada ugu badan kooxda Jwxo-shiil, ayaa waxay dareemeen in la faquuqay tan iyo intii ay dhaceen heshiisyadii nabadeed ee ka dhacay gabalka Ogaden.
Dadweynaha gabalka ayaa baraarugay, ka dib kolkii ay nabad qaateen labo jabhadood oo hore uga dagaalami jiray degaanka Somalida, basle uu diiday in uu qaato nabad hal garabka oo uu madax ka yahay Jwxo-shiil, oo u dhashay gabalka Dhagaxbuur.
Waa shirkii saddexaad ee ay yeeshaan waxgaradka gabalka Jarar, oo ay kaga hadlayaan sidii laga yeeli lahaa Jwxo-shiil iyo inta la socota ee gabalka u dhalatay.
Labo goor oo hore ayaa laga soo saaray go,aano lagu cambaaraynayo Jwxo-shiil. Intii xiligaas ka dambaysayna dad badan oo u dhashay gabalka ayaa garwaaqsaday in Jwxo-shiil, uusan wadin danaha guud ee gabalka Ogaden, gaar ahaana gabalka Jarar.
Shirkani, waxaa uu kaga gadisan yahay shirarkii hore waxaa ka qayb galaya masuuliyiin caan ah oo ka tagtay qurbaha iyo waliba xubnaha gabalka ugu jira dawlada degaanka Somalida Ethiopia.
Shirka oo socday labo maalmood ayaa waxaa ka mid ah dadka ka hadlay; Janaral CabdiraxmaanKhaliif Dhicis, Maxamuud Axmed Nuur [heeryo] oo ah wasiirka ka hortaga cudurka HIV,Cabdi Maxamed Gamaadiid oo ah wasiirka Qurbo joogta ee dawlada degaanka, Ismaaciil Sheekh Maxamed oo ah Gudoomiyaha maxkamada guud, Baashe Cabdi oo madaxa warfaafinta iyo Internetka iyo Ku xigeenka xafiiska Cilmi baadhista.
Waxaa kale oo iyana ka hadlay, cuqaal,Culimada diinta, haween iyo masuuliyiinta maamulka gabalka Jarar.